हेर्नुहोस् यस्तो छ तपाईको आगामी मंसिर ६ गतेसम्मको राशिफल, क-कसलाई छ त शुभ ?
प्रारम्भमा प्रियजनसँगको भेटघाटले उत्साह जगाउनेछ । भौतिक सुखका साधन जुट्नेछन् । तर, सोमवारपछि अर्थ अभावले आँटेको काम स्थगित हुन सक्छ । आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउन सक्छन्, सजग रहनुहोला । परिस्थितिले संघर्षको पाइलामा हिँडाउन सक्छ । सुखदुःखमा साथ दिनेहरू कमै भेटिए पनि सप्ताहान्तमा आस मारेको कामले उत्साह जगाउनेछ । टाढिएका साथीभाइ नजिकिनाले हर्ष बढ्नेछ । संघर्ष गर्नुपरे पनि विभिन्न अवसर हात पार्न सकिनेछ ।
सुरुमा परिश्रम परे पनि राम्रो प्रतिफल पाइनेछ । प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिन्दै विभिन्न अवसर हात पार्न सकिनेछ । रोकिएका काम बन्नाले आर्थिक पक्ष पनि सबल बन्नेछ । खर्च लागे पनि वर्गीय हक–हित संरक्षण तथा दिगो फाइदा हुने काम सुरु गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । प्रियजनसँग भेटघाट हुनेछ । मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिनेछ । बुधवारदेखि स्वास्थ्यमा समस्या देखिनुका साथै घरेलु समस्याले पिरोल्न सक्छ । आफ्नो स्वतन्त्रतामा पनि बाधा पुग्न सक्छ ।
बौद्धिक प्रतिस्पर्धाले केही समस्या निम्त्याउन सक्छ । सहपाठीहरूबीच असमझदारी बढ्नुका साथै अध्ययनमा पनि समय दिन नसकिएला । सोमवारदेखि स्थितिमा सुधार आउनेछ । प्रतिद्वन्द्वीहरूले पनि मित्रवत् व्यवहार गर्न थाल्नेछन् । तर अधिक खर्च हुने र विवादमा परिने समय छ । केही दौडधुप गर्नुपरे पनि शुभचिन्तकहरूको साथ दिनेछन् । प्रेमको बन्धन कसिनुका साथै रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर जुट्न सक्छ । सप्ताहान्तमा स्वास्थ्य बाधा हुने देखिन्छ ।
पारिवारिक असमझदारीले मन खिन्न हुनेछ । शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दा दुःख पाइनेछ । अवसरवादीहरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउन सक्छन् । पढाइलेखाइमा पनि ध्यान केन्द्रित नहुन सक्छ । बुधवारदेखि स्थिति अनुकूल बन्नेछ । रोकिएका काम बन्नेछन् भने नयाँ काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ । प्रतिस्पर्धामा उत्रिएरै आम्दानीको दिगो स्रोत हात पार्न सफल भइनेछ । सप्ताहान्तमा व्यावसायिक कामबाट मनग्गे धनलाभ हुनेछ । प्रेमको बन्धन कसिनेछ ।
सुरुमा राम्रै नतिजा पाइनेछ। हिम्मत गर्दा विशेष अवसर प्राप्त हुन सक्छ । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् । साहसी काम गरेर नाम कमाउने अवसर प्राप्त हुनेछ । सोमवारदेखि अलि अप्ठ्यारमेमा परिनेछ । नजिकका साथीभाइ टाढिन सक्छन् । केही अप्रिय समाचारले मन खिन्न हुन सक्छ । आँटेको काम बीचैमा रोकिन सक्छ । पेटको मौसमी गढबढीले स्वास्थ्यमा कमजोरी देखापर्न सक्छ । तापनि, सप्ताहान्तमा लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
धेरै बोल्ने बानीले विवाद निम्त्याउन सक्छ । कुरा लगाउनेहरूले आत्मीय सम्बन्धमा फाटो उत्पन्न गर्न सक्छन् । सोमवार र मंगलवार प्रतिस्पर्धीहरू परास्त हुनेछन् । तर, आफ्नै हठले अप्ठ्यारोमा परिएला । लगनशीलताले काम बन्नेछ र केही आम्दानी पनि हुनेछ । बुधवारदेखि पारिवारिक सहयोगले फाइदा हुनेछ भने अरूको भर पर्दा धोका हुन सक्छ । परिस्थितिलाई बेवास्ता गर्दा झमेला आइलाग्न सक्छन् । सानो कमजोरीले आफ्नो क्षेत्राधिकार संकुचित बन्ने देखिन्छ ।
विभिन्न अवसरले पछ्याए पनि सोमवार र मंगलवार कर्मगतिले पछि पार्न सक्छ । अरूको बहकाउमा परिनाले काम बिग्रने सम्भावना छ । अस्वस्थताले कमजोर महसुस हुनेछ । बीचमा प्रतिष्ठित काम प्रारम्भ गर्ने अवसर जुट्नेछ । रचनात्मक कामले धेरैलाई आकर्षित गर्न सकिनेछ । भौतिक साधन जुट्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ । प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिनेर विशेष अवसर हात पार्न सकिनेछ । सप्ताहान्तमा आफन्त टाढिनाने काम बिग्रने भयले सताउनेछ ।
प्रारम्भमा अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ला । खर्च बढ्नाले अर्थ संकट देखा पर्न सक्छ । सोमवारदेखि स्थितिमा केही सुधार आए पनि स्वास्थ्य समस्याले सताउन सक्छ । रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयास गर्नुहोला । केही विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला । सुन्दर पहिरनमा ठाँटिएर व्यक्तित्वको आकर्षण बढाउन सकिनेछ । भोजभतेरको निम्तो आउन सक्छ । सप्ताहान्तमा स्थिति अनुकूल बन्नेछ । रोकिएका काम बन्न थाल्नेछन् र प्रगति हुनेछ ।
प्रारम्भमा आयआर्जन बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काम सुरुआत गर्ने अवसर जुट्नेछ । तर खर्च समेत बढ्नाले आर्थिक अभावको अनुभूति हुनेछ । तापनि टाढाका साथीभाइसँगको सम्बन्धले लामो यात्रा गर्ने अवसर जुट्न सक्छ । बुधवारदेखि स्थिति अनुकूल बन्नाले उत्साह थपिनेछ । व्यसायतर्फ मिहिनेतले उचाइमा पुर्याउन सक्छ । दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा रोकिएको काम बन्नेछ । सप्ताहान्तमा नाम, दाम र इनाम हातपार्न सकिनेछ । तर, विवादास्पद काम गर्नुपर्ला ।
प्रतिष्ठित काम गरेर स्थापित हुने समय छ । काम देखाएर धेरैको मन लोभ्याउन सकिनेछ । नयाँ नोकरीमा प्रवेश वा पदोन्नति हुने योग छ । विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्नेछ । विशेष जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने समय छ । परिश्रमअनुसार राम्रै फल पाइनेछ । व्यापारलगायत दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने अवसर जुट्नेछ । मेहनतले नाम, दाम र इनाम दिलाउनेछ । मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिनेछ । बुधवार र बिहीवार भने खर्च बढ्नुका साथै स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ ।
प्रारम्भमा केही चुनौती सामना गर्नुपर्ला । स्वास्थ्य कमजोर रहे पनि केही समय पर्खंदा सहयोगीहरू जुट्नेछन् र काम सफल हुनेछ । समुदायको हक हितको संरक्षण गर्दै धेरैको भलाइ हुने काम गर्न सकिनेछ । मिहिनेतले सफलताको मार्गतिर अग्रसर गराउनेछ । नाम, दाम र इनाम हात पार्ने समय छ । मन मिल्ने साथी भेटिनुका साथै प्रेमको बन्धन समेत कसिन सक्छ । आम्दानीको स्रोत सबल बन्नेछ । दिगो फाइदा हुने काम सुरु हुनेछ । सप्ताहान्तमा भने अधिक खर्च हुनेछ ।
प्रारम्भमा अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ला । ईर्ष्या गर्नेहरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउन सक्छन् । काम गर्दा समेत जस नपाइनाले मन खिन्न रहनेछ । साताको उत्तरार्द्धतिर स्थितिमा सुधार आउनुका साथै गुमेको स्थान प्राप्त हुन सक्छ । सहयोगीहरूले समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउनेछन् । मेहनतले कीर्ति राख्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । मित्रहरूको सञ्जाल फराकिलो हुनुका साथै प्रेमको गाँठो कसिन सक्छ । आकस्मिक लाभ भए पनि खर्च समेत हुनेछ ।
वि.सं.२०७७ मंसिर ३ मंगलबार (इ.स. २०२० नोभेम्बर १८)
उपप्रा. लक्ष्मीप्रसाद बराल (फलित ज्योतिषाचार्य)९८४१३५२१६४
ओम गणेशाय नम : हेर्नुस्, कुन राशिका लागि कस्तो छ आजको दिन ?
तपाईको आज (मंगलबार) को राशिफल, आज यी ६ राशिकालाई हुनेछ बिशेष लाभ !
तपाईको आज (सोमबार) को राशिफल, हेर्नुहोस् आज क-कसलाई छ त लाभ ?
हेर्नुहोस् तपाइको आज (आइतबार) को राशिफल, आज क-कसलाई छ त शुभ ?
तपाईको आज (शनिबार) को राशिफल भन्छ-आज यी राशिकाले विशेष ध्यान दिनुहोला !
तपाईको आज (विहिबार) को राशिफल भन्छ, आज यी राशिकाले विशेष ध्यान दिनुहोला